Yiziphi izindlela zokunquma score score backlink?
Lesi sihloko sinikezelwe isihloko sekhwalithi yokuxhumanisa. Sizoxoxa ngezindlela indlela i-Google ehlola ngayo ikhwalithi yezixhumanisi ezingenayo nokuthi ungayilinganisa kanjani ikhwalithi yezixhumanisi kumkhankaso wokwakha umxhumanisi wakho. Lezi zici zokusebenzisa injini yokusesha ziyisisekelo sokudala iphrofayili yokuxhumanisa kwekhwalithi. Kunezinzuzo eziningi zokuthola i-quality link juice kwisayithi lakho. Okokuqala, uzophakamisa igunya lakho lomkhiqizo ngaphakathi kwe-niche yakho yemakethe nakuwebhu ngokujwayelekile. Ngaphezu kwalokho, ukulandela i-backlink kutholakala ijusi lokuxhumanisa kusayithi lakho. Uma bevela emithonjeni yewebhu ehloniphekile, bangakwazi ukuphakamisa isikhundla sekhasi lakho lewebhu bese bakhanga amakhasimende amasha amaningi.
Kubalulekile ukwazi ikhwalithi yezixhumanisi ezikhomba isayithi lakho ngoba lezi zinkinga zangasese zisebenza njengesici sendawo futhi zingathuthukisa isikhundla sakho sesayithi ekhasini lomphumela wosesho noma zichithe yonke imizamo yakho ye-SEO. Ezinsukwini zethu, akuzona zonke izilonda ezisekelwe emuva eziphathwa ngokulingana. Kuningi logaxekile nabaqashi abazama izinjini zosesho futhi bathole izixhumanisi ngezindlela ezingafani nezindlela eziphilayo. Kunokuba nje ubale inani lezixhumanisi zangaphandle ezikhomba ikhasi lewebhu, i-Google iphinda ihlole ikhwalithi yezixhumanisi ezingenayo. Ngokuqondile, i-Google ithatha igunya lokuphatha, ukuhambisana, isikhundla, nokuhlelwa kwazo zonke izixhumanisi ezikhomba isayithi lakho.
Yingakho udinga ukuhlola ngokucophelela amathemba okuxhumanisa njengoba izixhumanisi ezimbi zingalimaza idumela lakho lomkhiqizo futhi zidale ukwehla kwezinga. I-Google igweba imithombo yewebhu ephula izinkombandlela zayo zeWebmaster ngekhwalithi ephansi, izixhumanisi ze-spammy. Yingakho uma uqaphele ezinye izixhumanisi ezingenayo ezingenayo ezikhomba isayithi lakho, kufanele usebenzise ithuluzi le-Google Disavow ukuze lingatholakali kokubili kubasebenzisi nabasebenzisi.
Ake sixoxe ngezinye izindlela i-Google ezisebenzisayo ukucacisa amaphuzu we-backlinks.
Izinto ezicatshangelwa yi-Google ngenkathi kunquma amaphuzu we-backlinks.
Isiphathimandla se-Domain, igunya lekhasi kanye ne-PageRank
Esinye sezici ezibaluleke kakhulu ekunqumeni ikhwalithi yezixhumanisi ezingenayo igunya lomthombo web bafika. Imodeli ye-PageRank isekelwe kokulingana kokuxhumanisa nokuxhumanisa kwesixhumanisi. Ukuphakamisa igunya lesayithi, i-juice yokuxhumanisa ebaluleke kakhulu oyothola ngokusebenzisa i-backlink.
Ukubala igunya lekhasi lasekhaya noma umthombo wewebhu, ungasebenzisa i-Semalt Web Analyzer noma i-Moz Tool. Ngesizo samathuluzi, ungakwazi ukunquma i-Domain Authority ne-Authority Authority yomthombo wewebhu. Nge-URL ngayinye enikeziwe, uzothola amaphuzu kusuka ku-1 kuya ku-100. Eziphakeme lezi methrikhikhi, ukuxhumana okubaluleke kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, ungahlola igunya lezixhumanisi ezingenayo, usebenzisa isofthiwe ye-Majestic SEO. Le software izokunikeza ngamamethrikhi anjengokuthi "I-Trust Flow" ne "Citation Flow. "Kuyinkimbinkimbi, lezi zimingcele zizokubonisa amandla okuxhumana we-URL. Okuphakeme kokubili kwala ma-metrics, ukuxhumana okubaluleke kakhulu okuvela kule sayithi kuyoba.
Ukubaluleka kokuqukethwe komkhiqizo noma umthombo wewebhu
i-Google iba yinto ehlakaniphile kakhulu kulezi zinsuku futhi kulula ukuthi okuqukethwe komthombo wewebhu kuhambelana kanjani nesixhumanisi esingenayo kufakwe kuwo. Ingachazwa ngenhloso eyinhloko ye-Google yokuletha ikhwalithi ephakeme kuphela kodwa futhi ngokugcwele ihambisana nemiphumela yosesho lomsebenzisi.
i-Google ihlola ukufaneleka kobuchwepheshe bomthombo web ngokusebenzisa izixhumanisi zayo ezingenayo kanye namathekisthi okuqinisa ama-link. Yingakho udinga ukunaka ngokukhethekile ukubaluleka kombhalo wakho we-anchor. Sebenzisa igama lakho lomkhiqizo noma igama elingukhiye eliphezulu eliphezulu njengombhalo we-anchor wokuxhumanisa kwakho.
Ukuthola i-backlink emithonjeni efanele yewebhu ehambisana nendawo yesizinda sakho izokuthuthukisa isikhundla sakho sesimo sokusekelwa kwemibandela ethile yokusesha Source .